Daawo:- Feysal Cali Waraabe “Warsangeli waa seediyaasheey waa in raali gelin laga siiyaa gefkii loo gaystay”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Feysal Cali Waraabe “Warsangeli waa seediyaasheey waa in raali gelin laga siiyaa gefkii loo gaystay”.
Daawo:- Feysal Cali Waraabe “Warsangeli waa seediyaasheey waa in raali gelin laga siiyaa gefkii loo gaystay”.
August 31, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka maanta 3
Eng. Feysal cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucid ee Somaliland aya qiray inuu gaf wayn ahaa hadalkii taliyaha ciidanka Somaliland nuux taani.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay qalad ahayd hadalkii taani, isagoona tilmaamay in warsangeli ay qabaan gabar isaga ladhalatay sidaa daraadeedna uusan raali ka ahayn gafka loo geystay.
DAAWO VIDEOCali Maxamed Geedi oo Ahaa Ninkii Wasiirka Ugu Horeyey U Magacabay Gudoomiye Cumar Filish oo Qeexaya Shaqsigu Yahay
Maxaad kala socotaa qaabkii DFS ay u musuqmasuqday qoondadii Puntland ee arimaha Xajka.
Nin waalnaan jiray ayaa la arkay isago si wanaagsan u hadlaya oo si wanaagsan u labisan markaas ba la weydiiyey oo lagu yiri war hebelow mansha allah waad bogsatay. wuxu ku jawaabay War ma bogsane idinka isoo gaadhay oo hadda ila mid ah.
Faisal cali waraabe dadka wax ka dhegeysanaya ayaaba ka sii waalan ama heerkiisa oo kale jooga.
Aakhiro sabaan inay tahay Ciidagale Hargeisa Hilibka ku qali jiray ama suuqa adhiga xoolaha ku qala ayaa la leeyahay waa siyaasi !!!
War ka xishood seedigaa.Oo haddana odaytinimada uga xishood.Ha ku talax tagin Odayga xidid baad tahiine.War xididnimada fiican ka qaayo weeyn qaraabada.
Faysal anaga gabadh ka qabna isagu waxba nagama hayo sidaas sheekadda u fahan.
Anagu ciidagale bisado xita isma siino iska da’ gabdho, laakin nin warsangeli ah oo hargeisa ku Qayilaya waa guursan kara gabar faysal adeer u yahay.
sidaas u fahan sheekada Atoore Baadiye !